Ny ala dia toerana be hazo maniry. Misy dikany maromaro ampiasaina ho an'ny ala, mifototra amina fepetra maro. Ny ala dia mandrakotra ny 9,4%-n'ny tany na 30% hatramin'ny 50%-n'ny velarantany manontolo eto an-tany.
Ny ala koa dia toerana iainana ary fidiram-bola ho an'ny olombelona : tamin'ny fanombohan'ny taonjato faha 20, mahery ny 500 tapitrisa ny isan'ny olona miaina akaiky ala na ao anaty ala ; 150 tapitrisa amin'ireo no teratany.
Misy karazan'ala maromaro misy ; ny ala mbola tsy voakitika na mbola tsy voaovan'ny olombelona toetra dia lazaina hoe ala fototra, ary ny ala efa nokasihan'ny olona dia lazaina hoe ala segondera. Afats'ireo karazana ireo, misy koa ny ala any an-tanàna sy ny silvikioltora.
1.1 Any Eoropa
1.2 Any Afrika
Ny ala eoropeanina dia ala ananan'ny toe-tany mafana tsy tahaka ny any amin'ny tanimaty na any amin'ny Fehibe amin'ny andro fahavaratra ary mangatsiaka tsy tahaky ny any amin'ny tendron-tany. Ny latsakorana dia betsaka ary manara-potoana. Ny karazan-kazon'ny ala antonon-kafanana dia hazo kesika, chêne ary châtaigner.
Any Afrika misy ala mando any amin'ny farany avaratr' Afrika ary any amin'ny farany atsimo. Ny ala eo amin'ny faritry ny fehibe dia ala ara-pehibe : mikitroka, mando (latsahan'ny orana mandavan-taona) Ny karazan-kazo hita matetika ao amin'ny ala mafana dia Baobaba, akasia, ary « pin ».
Ny ala aziatika dia mitondro amin'ny ala mivelatra. Ny ohatra iray dia ny alan'i Komi, any Rosia. Betsaka ny karazan-kazo misy.
Any Amerika avaratra, ny ala dia alan'ny tany mangatsiaka any avaratra, ala mando mangatsiaka any avaratra andrefana ary tahaka ny alan'ny tany eo amorontsiraky ny Mediteranea any Atsimo andrefana. Ny ala any atsimo atsinanana dia ala mando (any Florida). Ny karazan-kazo misy anatin'ny alan' Amerika avaratra dia pin.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ala&oldid=602511"
Dernière modification le 11 Martsa 2013, à 11:12